China OEM Design Custom High Precision Car Auto ABS/PMMA/POM Plastic Injection Mold with Hot Runner emepụta na suppliers |DTG
OEM Design Custom High Precision Car Auto ABS/PMMA/POM Plastic Injection Mold with Hot Runner
N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ ozi zuru ezu maka oriọna ụgbọ ala a na-agba ntụtụ rọba.Mgbe okwu mmeghe a gachara, anyị kwenyere na unu ga-amatakwu maka ebu ntụtụ rọba akpaaka.
Ka anyị kwuokwa ụfọdụ ihe gbasara ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ihe ebu:S136 HRC48-52
Ịkpụzi ebu:ọnụ ụzọ ámá
okirikiri ịgba ọgwụ:75 sekọnd
Ngwa ngwaahịa:Acrylic (PMMA)
Arịrịọ elu ebu:SPI-A0 (elu enyo na-egbuke egbuke)
Kedu ihe bụ ọnụ ụzọ ámá na ebu?
N'ịkpụzi injection, oghere ọ bụla n'ime ihe ebu ga-enwerịrị obere oghere a na-akpọ ọnụ ụzọ ámá, nke na-enye ohere ka plastik na-ekpo ọkụ banye n'ime oghere ahụ tupu ọ gafere na gburugburu ihe dị n'ime ya ruo mgbe ejupụtara.
Gịnị mere anyị ji chepụta ọnụ ụzọ ámá na nke a ebu?
Imepụta akụkụ ọnụ ụzọ ámá bụ kasị n'ozuzu nke ebu imewe, na-eji nke ọma na multi-oghere ebu.Ọdịdị ya bụ akụkụ anọ ma ọ bụ ọkara okirikiri, ma dọba ya n'akụkụ ngwaahịa a kpụrụ akpụ.Ọ nwere ike iji maka ngwaahịa na obere akụkụ ma ọ bụ n'etiti ọkpụrụkpụ n'ihi na ọnụ ụzọ ámá Ọdịdị dị mfe na-adịghị mkpa elu àgwà.
Ụdị ọnụ ụzọ ámá ole dị na Mould?
Edemede a na-eleba anya n'ụdị ọnụ ụzọ ámá isii ndị a na-ejikarị eme ihe n'ịkpụzi injection: ọnụ ụzọ ihu, ọnụ ụzọ taabụ, ọnụ ụzọ ámá kpọmkwem/sprue, ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ọkụ ọkụ, ọnụ ụzọ pin, na ọnụ ụzọ okpuru.
Gịnị bụ ebe ọnụ ụzọ ámá?
Ọnụ ụzọ ámá dị na akụkụ a na-akpụzi injection na-ahapụ "onye akaebe" ebe akụkụ ahụ kewapụrụ na usoro ndị na-agba ọsọ.A na-ewere nke a dị ka ntụpọ ọdịdị yana a na-ezokarịkwa ya n'ebe na-adịghị ahụkebe n'akụkụ ya.
Kedu ihe kpatara eji ahọrọ obere ọnụ ụzọ ámá na ịkpụzi injection?
Obere ọnụ ụzọ ámá na-enye ọdịdị ka mma, mana chọrọ ogologo oge ịkpụzi ma ọ bụ nrụgide dị elu iji mejupụta nke ọma.Nrụgide oghere dị elu na-eme ka nrụgide dị ukwuu na-akpụzi n'ime akụkụ ahụ.... N'ịkpụzi injection rọba, ọ bụrụ na oke ọnụ ụzọ erughị eru, a ga-amachibido ọsọ nke resin a wụrụ awụ ka ọ na-agbalị ịgafe.
Nke gara aga: Ọkachamara China ahaziri Plastic injection Mold For Car Central Control Panel
Osote: OEM Plastic injection Tooling Mold of Storage Box Shell